XASAASI: Mustaqbalka Dembele Oo Warkii Ugu Cuslaa Kasoo Kordhay & Go'aanka Kama Dambaysta Ah Ee Barcelona Ku Dhaadhicinayso - GOOL24.NET
XASAASI: Mustaqbalka Dembele Oo Warkii Ugu Cuslaa Kasoo Kordhay & Go’aanka Kama Dambaysta Ah Ee Barcelona Ku Dhaadhicinayso
Waxa xog cusub laga helayaa mustaqbalka garabka kooxda Barcelona ee Ousmane Dembele kaas oo heshiiskiisa Camp Nou yahay mid dhacaya dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Saxafiga ree Spain ee Gerard Moreno oo ah mid aad xog ogaal ugu ah arrimaha Barcelona ayaa warbixino cusub ka sheegay halka ay isla marayaan Barcelona iyo Dembele oo wadahadalo heshiis kordhin ah oo la isku mari la’ yahay mudo u socdeen.
Moreno ayaa sheegaya in Dembele si cadaan ah ugu sheegay Barcelona inuusan wax heshiis kordhin ah ugu samaynayn qoddobada ay haatan usoo bandhigeen.
Intaas waxa dheer inuusan doonayn inuu kooxda ka tago suuqa bishan January oo uu doonayo inuu qaab bilaash ah ku baxo bisha June. Dembele ayaa isku arka ciyaaryahan heer sarre ah oo mudan in waxa uu yahay lagu abaalmariyo.
Sababta uu Dembele u doonayo inuu bilaash ku baxo xagaaga ayaa ah inuu rabo in kooxda uu u wareegayo uu ka helo mushahar badan marka uu ka badbaadiyo lacagtii ay ka bixin lahaayeen saxeexiisa.
Dhinaciisa saxafi Javi Miguel ayaa sheegaya in tilmaamaha oo dhami ay sheegayaan in kulankii El-Clasico ee Spanish Super Cup uu ahaa ciyaartii ugu dambaysay ee uu Dembele kooxda u ciyaaro.
Moreno ayaa sheegaya in madaxweyne Joan Laporta iyo Barcelona ay go’aan adag gaadhayaan markooda oo ay ku wargelin doonaan Dembele in uu keydka ku qudhmi doono oo aysan ciyaarsiin doonin haddii uu wax heshiis kordhin ah samayn waayo.